स्लिम खुट्टाहरूको व्यायाम - चरणहरू, सुझावहरू र अधिक | बेजिया
सुसाना Godoy | 10/06/2021 14:00 | व्यायाम
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ तपाईका खुट्टामा स्लिम लगाउने उत्तम अभ्यास के हो? आज तपाईं शंकाहरू छाड्दै हुनुहुन्छ किनभने यो ती विकल्पहरू मध्ये एक हो जुन धेरै र धेरैले माग गर्छन्। हाम्रो शरीरको त्यो खास क्षेत्र कम गर्न सँधै सजिलो हुँदैन र यस कारणले हामी तुरुन्तै निराश हुन्छौं।
तसर्थ, यसलाई बनाउन उत्तम हो आधारभूत व्यायामको संयोजन, अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू र यी सबैले यसलाई स्वस्थ आहारको साथ घेरेका छन् जहाँ छन्। केवल तब मात्र हामी के गर्न को लागी सेट सबै प्राप्त गर्न सक्दछौं। अवश्य पनि, तपाईसँग थोरै धैर्यता र जिद्दी हुनुपर्दछ। के हामी हाम्रो लक्ष्यको लागि झगडा सुरु गर्छौं?
1 कसरी खुट्टा को बोसो छिटो जलाउने
2 के पातलो खुट्टा मा खान रोक्न के
3 स्लिम खुट्टा र फिलामा व्यायाम
3.3 माथि र तल कदम
4 स्लिम खुट्टा र सेल्युलाईट हटाउन व्यायाम
5 चाल र व्यायामहरू तपाइँको फिलालाई पातलो बनाउने
कसरी खुट्टा को बोसो छिटो जलाउने
यद्यपि हामी चाहन्छौं, हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि हामी हतारमा शरीरको कुनै पनि क्षेत्रमा फ्याट हराउन सक्दैनौं। तर यो सत्य हो कि हामी केहि मार्गहरू थोरै छोटो फेला पार्न सक्दछौं। पहिलो स्वस्थ आहार वा जीवनशैलीको बारेमा सोच्नु हो। हामी भोकाउनु पर्दैन धेरै कम छैन, तर हामी हाम्रो क्यालोरी सेवन घटाउँछौं, बढि तरकारी र प्रोटिनहरूको छनौट गर्छौं, कार्बोहाइड्रेट राख्दछौं तर केही समयको लागि हाम्रो जीवन बाहिर फ्राइडयुक्त खाना र पेस्ट्री लिन्छौं।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ व्यायामको एक भाग हो जुन खानाले पूर्ण भयो। यस अवस्थामा, तपाईं भित्र हाम फाल्न शुरू गर्न सक्नुहुन्छ कार्डिभास्कुलर गतिविधिहरू जस्तो अनुशासनहरू गर्दै। कुन हुन्? ठीक छ, मध्यम गतिमा हिड्न जानुहोस्, अभ्यास साइकल वा स्पिनि। र निस्सन्देह, सीढीहरू माथि जानका लागि पनि त्यस्तै गणना गर्दछ। तिनीहरू सबै गतिविधिहरू हुन् जहाँ मुटु लगभग दौडिएको पहिलो मिनेटबाट दौडन्छ, जुन राम्रो परिणाम दिनेछ जब यो फ्याटलाई बिदाइ दिन आउँदछ। दुबै, अघि र पछि, प्रशस्त पानी वा जडिबुटी चिया पिउन र सुगन्धित पेय छोड्नुहोस्। इच्छित लक्ष्य प्राप्त गर्न तपाईको पहिलो कदमहरु पहिल्यै लिईएको छ!
के पातलो खुट्टा मा खान रोक्न के
खुट्टा वा शरीरको अन्य क्षेत्रहरूमा तौल गुमाउने कुरा गर्दा यो धेरै नै दोहोरिने प्रश्न हो। तर सत्य यो हो कि हामीले वास्तवमै खानुपर्दछ, तर स्वस्थ र धेरै विविधताहरू छन्। यो सत्य हो कि हप्तामा एक पटक हामी आफैंमा लिप्त हुन सक्दछौं, तर यदि हामी स्वस्थ खानामा आधारित जीवनशैली कायम राख्छौं भने, हामीले आशा गरेभन्दा छिटो लक्ष्य हासिल गर्नेछौं।
हामीले बिदा, वा बिदाइ, सबै पूर्व-पकाएको खाना, भुटेको वा पेस्ट्रीहरूमा भन्नु पर्छ.
त्यस्तै, मिसाई कार्बोनेटेड पेय वा प्याक गरिएको जुसमा पनि।
हामी अधिक इन्फ्युसन वा कफी पिउनेछौं तर स्किम मिल्कको साथसाथ दही पनि चिनी बिना।
मासु को रूप मा, यो सत्य हो कि हप्ताको एक दुई पटक तपाईलाई जे मन पर्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर समय को विशाल बहुमत हामीले सेतो मासुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ जस्तै कुखुरा वा टर्की.
माछा, टुना र केही समुद्री खाना पनि हाम्रो नयाँ आहारको हिस्सा हुनेछ.
निस्सन्देह, ती सबै प्रोटीनहरू तरकारीहरूसँग मिल्नु पर्छ। वास्तवमा, यसले तपाईंको प्लेटको आधा भाग ढाक्नेछ। अन्य आधा मध्ये, एक हिस्सा प्रोटीनको लागि र अर्को कार्बोहाइड्रेटको लागि हुनेछ जस्तै गहुँको रोटी वा पास्ता।
स्न्याकिंग क्षणहरूका लागि फलहरू समावेश गर्दछ र भिटामिनहरूको योगदानको लागि जुन तपाईंलाई पनि आवश्यक पर्दछ।
स्लिम खुट्टा र फिलामा व्यायाम
तपाईंको खुट्टा पातलो गर्न सबैभन्दा उत्तम व्यायाम के हो? यो एक प्रश्न हो जुन सधैं हामीलाई सताउँछ र अब, हामीसँग उत्तर छ। तर यो केवल एक मात्र होइन, तर हामी धेरै र ती सबैलाई वास्तवमा प्रभावकारी फेला पार्नेछौं, त्यसैले हामी त्यसलाई आफ्नो शरीरमा जाँच्न जाँदैछौं।
सुरु गर्नु अघि कुनै पनि व्यायाम दिनचर्यायसपश्चात चोटपटकबाट बच्न पहिले नै न्यानो पार्नु राम्रो हुन्छ। त्योले भन्यो, स्लिम खुट्टाहरूमा उत्तम व्यायामको प्रश्नको जवाफ दिंदा, हामी पहिलो स्थानमा स्क्वाटसँगै थियौं। हामीसँग धेरै संस्करणहरू छन्, वजनको साथ वा बिना, बारको साथ, सुमो, isometric, आदि तर यो भन्नु पर्दछ कि ती सबैलाई आज हामीलाई यहाँ ल्याउने कुराको बारेमा सम्झौता गर्न अझ उत्तम हुनेछ। अझ बढी केहि छ भने, तपाईं आफ्नो प्रशिक्षणलाई रमाईलो बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारका साथ दिनचर्या सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक रिप ब्लकको बीचमा २० सेकेन्डसम्म आराम गर्न सम्झनुहोस्।
यस अवस्थामा, यस कदमले हामीलाई तौल घटाउन तर सम्पूर्ण खुट्टामा टोन बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यसोभए यो हाम्रो दैनिक तालिकामा पनि उपस्थित हुनुपर्दछ। तपाईं उठ्नुहोस्, तिनीहरू बीचको सानो अलगावको साथ र तपाईंको एउटा खुट्टाले पछाडि चरण लिनुहोस्, जबकि अर्को फ्ल्यास रहन्छ। तर यो कुरा सम्झनुहोस् कि घुँडाले खुट्टाको अंश पास गर्नु हुँदैन किनभने त्यसो भए हामीले कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न सक्छ। लन्ज जम्पि with, पार्श्व, अगाडि वा पछाडि उठाउन इत्यादिको साथ हुन सक्छ। के हामीलाई फेरि एकपटक हाम्रो उत्तम प्रशिक्षण तालिका सिर्जना गर्न छनौट गर्दछ। तपाईं एक स्क्वाट को संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ र बाहिर यो, एक lunge लिनुहोस्।
माथि र तल कदम
एक चरण, एउटा बेन्च वा एउटा चरण यस प्रकारको व्यायामको आधारहरू हुनेछ। किनकि यसले हामीलाई हाम्रा खुट्टाहरूलाई अझ आन्दोलन जारी राख्न अनुमति दिन्छ, जसलाई यत्तिको आवश्यक छ। र पनि हामी यस जस्तो व्यायाममा हिप्स, क्वाड वा बाछाहरूलाई समावेश गर्दछौं। हामी हाम्रो चरण अगाडि उभिन थाल्छौं, तर यदि तपाईंले बेन्च वा ड्रउरको लागि रोज्नु भएको छ भने, यो घुडा भन्दा माथि हुनुहुन्न। हामी यसमा एउटा खुट्टा राख्छौं, एउटा चरण लिनुहोस् र अर्को खुट्टाको साथ आफूलाई माथि धकेल्नुहोस्। जे होस् छनौट उचाइ, सधैं शरीर अभिलेख गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्, तर पछाडि सीधा राख्न, हाम्रो खुट्टा मा बल बनाउने। तपाईं अधिक सन्तुलित समाप्तको लागि वैकल्पिक खुट्टा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो पूर्ण व्यायाम हो, त्यसैले यो पनि हाम्रो प्रशिक्षणमा हुनुपर्दछ। तपाईं दुबै स्क्वाटिंग र स्क्वाटिting सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, आफ्नो हातहरू भुँइमा राखेर, तपाईं आफ्नो खुट्टा पछाडि फाल्नुहुनेछ, एक सानो धक्काको साथ। त्यसो भए हामी उठ्नेछौं र हो हामी आफ्नो खुट्टामा हाम फाल्ने छौं, प्रक्रिया शुरू गर्नका लागि मैदानमा फिर्ता जान। यदि एक चपखल तरीकाले गरिन्छ, हामी एक राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछौं किनकि यसले मुटुको दौड पनि धेरै बनाउँछ। अवश्य पनि, तपाइँ सँधै गहिराई र प्रयासलाई तपाइँको आवश्यकतामा समायोजित गर्नुपर्दछ।
स्लिम खुट्टा र सेल्युलाईट हटाउन व्यायाम
हामीलाई चिन्ता गर्ने अर्को समस्या सेल्युलाईट हो। ती अवरोधहरू मध्ये एउटा जुन जहिले पनि हटाउन सकिदैन, त्यसैले हामीले हाम्रो पक्षमा धेरै गर्नुपर्दछ। सबै अघिल्ला सिफारिशहरूको थप, केहि सूक्ष्मता थप्न आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, खाना अनुभाग मा, यो सत्य हो फल पनि उपस्थित छ तर यस अवस्थामा हामी स्ट्रबेरी, तरबूज वा केरामा बढी शर्त लगाउँछौं किनभने तिनीहरूसँग एन्टीआक्सीडन्टहरू छन् र हामीलाई यती धेरै तरल पदार्थहरू रोक्नबाट रोक्दछन् जुन एउटा त्यस्तो आधार हो जसद्वारा घृणा गरिएको सेल्युलाईट संचित हुन्छ।
स्लिम खुट्टाहरू र सेल्युलाईट हटाउनको लागि अभ्यासहरू मध्ये, हामीसँग तिनीहरूसँग छोडियो जसलाई थोरै बल चाहिन्छ। यसको लागि उत्तम लचक ब्यान्डमा शर्त लगाउनु हो, जसले सधैं काम गर्ने प्रत्येक भागलाई टोन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले यहाँ यो वास्तवमै आवश्यक छ। दुबै lunges र squats नबिर्सनुहोस् जो यस कारणका लागि कहिल्यै अनुपस्थित हुन सक्दैन। तर नबिर्सनुहोस् कि यस अवस्थामा तपाईले आफैलाई तौलको साथ पनि राम्रो परिणामको आनन्द लिन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। माथिल्लो र सिढीहरूमा जाँदा नै, जहाँ तपाईं पनि आफ्नो गाँठोमा वजन राख्न सक्नुहुन्छ। यसले स्यागिंगलाई हटाउन मद्दत गर्दछ र घोटालाको खुट्टा तपाईको अपेक्षा भन्दा चाँडो देखाउन सक्षम हुनेछ।
चाल र व्यायामहरू तपाइँको फिलालाई पातलो बनाउने
उल्लेख गर्न बाँकी साम्प्रिकाहरूमध्ये हामीसँग त्यस्तै छ तपाईंले आफ्नो प्रोटीन सेवन बढाउनु पर्छ। किनभने व्युत्पन्न हुनुको साथै हामीलाई मांसपेशिहरूको बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो बिहान कफी मिस गर्न सक्नुहुन्न, त्यसो भए यसलाई संयममा पिउनुहोस् तर यस बारे नबिर्सनुहोस्। थप रूपमा, तपाईं जहिले पनि स्किम मिल्कको साथ यसको साथ दिन सक्नुहुन्छ। तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ कि यो एक पेय हो जसले मेटाबोलिज्मलाई गति दिन्छ ताकि हामी यसलाई हाम्रो जीवनमा पनि चाहिन्छ। नुन एक छेउमा रिलीगेट गरिएको छ, किनकि तपाईंले पहिले नै सोच्न सक्नुहुन्छ, र लसुन, ओरेगानो वा तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने जस्तो मसलाहरू थप्न उत्तम हुन्छ। तपाईले स्वाद पाउनुहुनेछ तर तरल पदार्थ नबनाई।
तपाइँको जाँघो पातलो गर्न को लागी तपाइँ अन्य व्यायामहरु मा शर्त गर्न सक्नुहुन्छ काँधमा पुल। त्यो हो, तपाईं आफ्नो खुट्टामा झुकाउनुपर्दछ तपाईंको खुट्टा झुकाएर र अलि अलि गरेर तपाईंले सास फेर्नुहुन्छ र आफ्नो शरीर उठाउनुहुन्छ तर यसलाई ब्लकमा गर्नुहुन्न। तपाईं खुट्टाको तलवाहरू र काँधको अंश द्वारा समर्थित रहनुहुनेछ। यो व्यायाम तपाईंको हात उठाउँदा वा टिपटोमा तपाईंको खुट्टा राखेर फरक हुन सक्छ। यो एक आसन हो जुन सामान्यतया पाइलेट्समा गरिन्छ र यो अनुशासनले हामीलाई यसको आसन र व्यायाममा मद्दत गर्दछ। हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न।
खुट्टा उठाउनु सबैभन्दा आधारभूत अर्को हो। फेरि झूट बोल्दै, अनुहार सम्म, हामी एउटा खुट्टा उठाउनेछौं र त्यसपछि हामी त्यसलाई हड्ताललाई तल झार्नेछौं जब हामी अर्कोलाई उठाउछौं। यस क्षेत्रको व्यायाम बाहेक, हामी पेटको साथ पनि यही गर्नेछौं। यसकारण हामीले एउटा ढु already्गाले दुईवटा चराहरूलाई मार्छौं! अलि अलि गरेर सबै सुझावहरूको पालना गर्दै, तपाईले भिन्नता याद गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा निश्चित हुनुहुन्छ। हामीलाई भन्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » व्यायाम » स्लिम खुट्टा गर्न व्यायाम